箴言 21 CCB – Mmebusɛm 21 AKCB | Biblica
箴言 21 CCB – Mmebusɛm 21 AKCB
1Ɔhene koma da Awurade nsam;
ɔkyerɛ no ɔkwan te sɛ asuten ma ɔkɔ baabiara a ɔpɛ.
2Onipa akwan nyinaa teɛ wɔ nʼani so,
nanso Awurade na ɔkari koma.
3Sɛ woyɛ ade pa ne ade a ɛteɛ a,
ɛsɔ Awurade ani sen afɔrebɔ.
4Ani a ɛtra ntɔn ne ahomaso koma,
ne amumɔyɛfo asetena nyinaa yɛ bɔne!
5Nsiyɛfo nhyehyɛe de mfaso ba,
sɛnea ntɛmpɛ kowie ohia no.
6Ahonya a nkontompo tɛkrɛma de ba no,
ɛyɛ omununkum a etwa mu kɔ, na ɛsan yɛ owu afiri.
7Amumɔyɛfo basabasayɛ bɛtwe wɔn akɔ,
efisɛ wɔmpɛ sɛ wɔyɛ nea ɛteɛ.
8Onipa a odi fɔ no akwan yɛ kɔntɔnkye,
na nea ne ho nni asɛm no nneyɛe teɛ.
9Suhyɛ twɔtwɔw ase baabi tena
ye sen sɛ wo ne ɔyere tɔkwapɛfo bɛtena fie.
10Omumɔyɛfo kɔn dɔ bɔne;
onni ahummɔbɔ mma ne yɔnko.
11Sɛ wɔtwe ɔfɛwdifo aso a, ntetekwaafo hu nyansa,
sɛ wɔkyerɛkyerɛ onyansafo a, onya nimdeɛ.
12Ɔtreneeni no hu nea ɛrekɔ so wɔ omumɔyɛfo fi,
na ɔde omumɔyɛfo no kɔ ɔsɛe mu.
13Sɛ onipa sisiw nʼaso wɔ mmɔborɔni su ho a,
ɔno nso besu afrɛ, na wɔrennye no so.
14Kokoa mu adekyɛ dwudwo koma,
kɛtɛasehyɛ nso pata abufuwhyew.
15Sɛ wubu atɛntrenee a, atreneefo ani gye,
nanso ɛyɛ ahunahuna ma abɔnefo.
16Onipa a ɔman fi nhumu kwan so no
bɛhome wɔ awufo fekuw mu.
17Nea odi ahosɛpɛw akyi no bɛyɛ ohiani;
nea ɔpɛ nsa ne ngo no rennya ne ho da.
18Amumɔyɛfo de wɔn nkwa to hɔ ma atreneefo,
na atorofo yɛ saa ma wɔn a wɔyɛ pɛ.
19Eye sɛ wobɛtena sare so,
sen sɛ wo ne ɔyere tɔkwapɛfo a ne koma haw no no bɛtena.
20Nnuan pa ne ngo ayɛ onyansafo fi ma,
nanso ɔkwasea di nea ɔwɔ nyinaa.
21Nea otiw trenee ne ɔdɔ no
nya nkwa, yiyedi ne anuonyam.
22Onyansafo tow hyɛ ahoɔdenfo kuropɔn so,
na odwiriw abandennen a wɔn werɛ hyɛ mu no gu fam.
23Nea ɔkora nʼano ne ne tɛkrɛma no
twe ne ho fi amanenya ho.
24Ɔhantanni a ɔma ne ho so no, ne din ne “Ɔfɛwdifo”
ɔde ahantan ntraso yɛ ade.
25Nea ɔkwadwofo kɔn dɔ no bɛyɛ owu ama no,
efisɛ ne nsa mpɛ adwumayɛ.
26Da mu nyinaa ɔpere sɛ obenya bebree,
nanso ɔtreneeni de, ɔma a ɔnnodow ho.
27Omumɔyɛfo afɔrebɔ yɛ akyiwade,
ne titiriw ne sɛ ɔde adwemmɔne bata ho.
na wɔbɛsɛe obiara a otie no no nso.
29Amumɔyɛfo di akakabensɛm,
na ɔtreneeni de, osusuw nʼakwan ho.
30Nyansa, nhumu ne nhyehyɛe biara nni hɔ a
ebetumi ayɛ yiye atia Awurade.
31Wosiesie apɔnkɔ ma ɔko da,
nanso nkonimdi yɛ Awurade dea.
AKCB : Mmebusɛm 21